Ogaden News Agency (ONA) – Turkiga oo Xadhiga Ka Jaray Saldhigga Milateri ee Muqdisho.
Turkiga oo Xadhiga Ka Jaray Saldhigga Milateri ee Muqdisho.
Dowlada Turkiga ayaa xarigga ka jartay saldhigga milateri ee ay ka hirgalisay magaalada Muqdisho. Saldhiggan ayaa waxaa uu noqonaya xarunta tababar ee ugu weyn adduunka ee uu Turkiga ka hirgeliyo meel ka baxsan gudaha dalkaasi.
Munaasabadda furitaanka saldhigga oo ay ka qeyb galeen saraakiisha milateriga ee Trurkiga iyo Soomaaliya ayaa waxaa sidoo kale lagu casuumay wakiilada beesha caalamka u jooga Soomaaliya, saraakiil ka socda AMISOM, Midowga Yurub iyo gaashaanbuurta NATO.
Dowlada Turkigu waxaa ay sheegtay in saldhiggani halkii mar lagu tabababari karo inkabadan kun iyo shan boqol oo ah ciidammada dowladda Soomaaliya. Ula jeeedada saldhiggani ayaa la sheegay inay tahay sidii loo xoojin lahaa ciidammada milateriga ee Soomaaliya, si loo soo afjaro dagaalka ka dhanka ah xarakada Al-Shabaab ee Soomaaliya.
Inkabadan labaatan askari oo ah kuwa nabad ilaalinta ee midowga Afrika iyo ciidamo kale oo ajnabi ah ayaa ku sugan Soomaaliya, kuwaa oo halkaasi u jooga taakuleynta ciidammada dowlada iyo sidii looga adkaan lahaa Alshabaab.
Saldhigan oo loo dhisay qaab casri ah ayaa ku yaalo deegaanka Jasiira ee magaalada Muqdisho, waxaana dhismahani uu ku fadhiya dhul dhan afar kilomitir. Saldhiggani ayaa waxaa uu sidoo kale leeyahay darbi shub ah iyo dhismayaal casri. Madaxdii halkaasi ka hadashay oo isugu jira Soomaali iyo Turki ayaa ku nuuxnuuxsaday in saldhigani uu gacan ka gaysan doona sidii loo tayeen lahaa ciidammada dowladda.
Taliyaha ugu sareeya ciidammada milateriga ee Soomaaliya Axmed Jimcaale Cirfiid ayaa sheegay in dhibaato ay ku qabeen qalabeynta ciidammada marka la tababaro, waxaana uu bogaadiyay tallaabadan dowladda Turkiga ay ka hirgalisay gudaha wadanka. Dugsigan tababarka ayaa u sahli doonaa wasaarada gashandhiga ee Soomaaliya sidii loo qalabeyn lahaa ciidammada dowladda.